6 I-Piece best Synthetic Makeup Brush Setha China Manufacturer
Incazelo:I-Makeup Brush Setha,Makeup Brushes,I-Makeup Brush Isetha Kakhulu
Home > Imikhiqizo > Setha ukusetha > 6pcs Ukusetha kwe-Brush > 6 I-Piece best Synthetic Makeup Brush Setha
I-Model No.: YC027
A 6 piece piece brush setethi ehlanganisa 2 ezinkulu isisekelo makeup brushes kanye 4 ezincane concealer amabhulashi. I-6 Piece best Synthetic Makeup Brush Set Isebenzisa Izinwele Zokwenziwa.
Izibhamu zokwenziwa ziyi-100% ye-vegan ne-hypoallergenic yesikhumba esibucayi. Izindebe ezinamahloni kakhulu, ezithambile, ezisezingeni eliphezulu azizona izikhangiso ze-powders neziphuzo, ngaleyo ndlela unciphisa inani lesisekelo noma i-concealer edingekayo ukuqedela umsebenzi.
Lezi yizona ezisezingeni elihle kakhulu lezibhamu nezithukumezi zokufihla ukuze zisetshenziselwe ukuthola ukupheka kwe-makeup epholile, engenasici. Izibhamu zokwenziwa zenzelwe ukusebenzisa i-powder, ukhilimu kanye nokwakhiwa kwamanzi ebusweni. Leli kithi lokuzithokozisa elisezithombeni liqukethe ama-brushes for foundation kanye concealer ukuthola ukukhanya okuphelele, okucacile.
Le 6 Piece best Synthetic Makeup Brush Set Setkethe 6 amabhulashi alandelayo:
A domed, eside-handle, zokwenziwa powder shayela. Isebenzisa izisekelo zoketshezi zamakhemikhali namakhemikhali, kanye nama-pulders okufakiwe nokucindezela ebusweni. Ikhanda le-brush le-dome liqukethe izinwele ezinde zokwenziwa zokwakha ukuze kubonakale ukubukeka okungokwemvelo, kwemvelo, kwe-airbrushed. Uma ngabe ufisa, ukwandisa ukwakha izendlalelo ukuze uthole ukufakwa kwesisekelo esidingekayo.
I-brush yethu ene-Angled inenhloko ephathekayo, ekulu kakhulu eyenzelwe ngokuqondile ukusiza ukudala ama-contours achaziwe.
I-oval refiner brush:
I-encane, i-oval, isibambo eside, i-oval refiner brush. Umbhoshongo ohlotshiswe ngama-oval unamaphethelo aphezulu futhi ahlangene. Idizayinelwe ukusebenzisa i-concealer ezindaweni ezizungezile, njengezindawo ezizungezile amehlo, izinhlangothi zempuphu ne-chinyane. Le shayela ye-refiner ye-oval nayo ibuye isebenzise ukuxuba imigqa eqinile eshiywe ezinye izibhamu ezibhekene nokubhekwa, kugcizelela phezulu kwekhasi, ama-cheekbones nezindawo zomnsalo zekendedi.
Umshini we-refiner ojikelezayo:
I-small, dome, isibambo eside, ibhulashi yokwenziwa. I-brushed buffs ne-blends ixhuma esikhunjeni ukusula imibuthano emnyama, izibhamu, ubomvu nezinye izifo ezingapheli. I-brush ye-vegan ingasetshenziselwa ukugqamisa ngokucacile nokuthunga izimpande, ama-cheekbones nezindawo zomugqa wendlala.
I-brow brow ibhulashi:
I-angled flat, flat-handle, ibhulashi yokwenziwa. Ibhulashi e-angled flat lihambisana nazo zonke izindawo zamehlo. Iphelele kakhulu uma isetshenziselwa ukusebenzisa i-concealer ukufihla ngaphansi kwemibuthano yamehlo nezinyonga, ubomvu kanye nezinye ukungapheleli kwesikhumba ekhaleni. Le shayela elingaphansi lensimbi lingasetshenziselwa ukuchaza ngokunembile impumu kanye nama-cheekbones.
Umklamo ophansi, oweqile owenziwe ngokungahambisani nokungasebenzi
Hlanza i-Brush inyanga ngayinye.
1. Clean kanye ngenyanga.
2. Okungenani ukuhlanza okujulile kwezinyanga ezimbili
3. Hlela ngokushesha ngemuva kokusebenzisa ibhulashi nsuku zonke.
Indlela yokuhlanza ukushayela.
1. Beka ikhanda lebhayisikili emanzini afudumele okugeza.
2. Ngezibhamu ezenziwe ngezinwele zemvelo, ungasebenzisa i-shampoo engathathi hlangothi ukuhlanza. (Thatha iS Shampoo ngesandla sesandla sakho, bese unciphisa ibhulashi, sebenzisa umunwe ukuze ugijime ngokucophelela ekuqondeni kwewashi kuze kufike ekungcoleni kuye kwahlanzwa, khona-ke ugeze futhi usebenzise izicubu ukuze uyomise kancane.Izilwane zilalele, ungawufaki, uphethile umshini kuze kube yilapho usomile ngokuphelele.Ungabe usawubheke phansi ukuze ume, kungenjalo kuzokwenza ukuthi uthuthuke.
Izigaba zomkhiqizo : Setha ukusetha > 6pcs Ukusetha kwe-Brush
I-Mini Makeup Brush Isethi Ephathekayo Xhumana Nanje
Olive Soft Sponge Egg for Cream Liquid Xhumana Nanje
I-High Density Sponge Beauty Egg Makeup Amathuluzi Xhumana Nanje
I-Makeup Sponge-shaped-shape I-Sponge Ayidli Powder Xhumana Nanje
I-Makeup Brush Setha Makeup Brushes I-Makeup Brush Isetha Kakhulu